Warshadaha Shiinaha iyo Warshad sameynta tuubooyinka Shiinaha | Jrain
Tuubbooyinka Fiberglass waxaa ka mid ah tuubbooyinka fiberglass-ka saafiga ah, tuubooyinka ciidda, tuubbada ka-go'idda, tuubbada labalabyada leh (oo leh PVC, CPVC, PE, PP, PVDF, iwm) iyo wixii la mid ah
Dhismaha darbiyada tuubbooyinka fiberlass-ka waxay ka kooban yihiin saddex lakab:
1．Layli: wuxuu go'aamiyaa iska caabbinta ugufiican ee dhex-dhexaadka.
2．Lakabka qaab-dhismeedka: wuxuu bixiyaa xoog farsamo yaqaan sare iyo iska caabbinta xamuulka.
3．Maqaarka kore: wuxuu ka ilaaliyaa nidaamka tuubbada cimilada, galinta kiimikada iyo shucaaca UV.
Waxay aad ugu jecel yihiin warshado badan sababta oo ah faa'iidooyinka hoose:
1．Awoodda lagu habeyn karo xaalado badan oo badan oo adkaysiga ugaarsiga dillaaca
2．Miisaan yar (in ka yar 20% bir, 10% oo la taaban karo)
3．Awood aad u fiican oo miisaan leh (ka xoog badan bir bir miisaan miisaan leh)
4．Faahfaahin hooseysa ee burburka (> 25% ka wanaagsan birta)
5．Xasiloonida cabbirka wanaagsan
6．Dhaqdhaqaaqa kuleylka hooseeya
7．Kharashaadka dayactirka muddada-gaaban
Habab badan oo kaladuwan oo wada jir ah ayaa loo heli karaa tuubbooyinka fiberglass-ka sida isku-darka, laf-dhabarta iyo isku-dhafka guluubka, isku-darka burcadda, isgoysyada qufulan iyo kuwa kale.
Socodka socodka caadiga ah ee tuubbada fiberlass waxaa ka mid ah:
1. Dabayl hawo ah, buufiyo buufin iyo dusha sare ee dabaysha;
2. Samee daawo iyo mareer wax lagu nadiifiyo;
3. Ku dar walxaha isku qasan ama haraaga iyo hoostiisa (ku tiirsanaan qaabeynta) si loo kordhiyo adkaanta
4. Samee xawaare furfuran iyo xayrta si loo buuxiyo shuruudaha dhaadheer iyo hoop;
5. Ku nadiifi tuubbooyinka rakibbo aad u fog;
6. Gooyaa oo googooyaa darafyada tuubbooyinka si ay u sameeyaan gambaleelka iyo laf-dhabarta isku-darka (waxay kuxiran yihiin habka wadajirka ah);
7. Tuubbada ka soo qaad mandrel oo leh qalabka hydraulic;
8. Baadhitaanka hawo baradho ee dhuumaha. Haddii u qalmo, sii daa tuubbada.
Jrain waxay naqshadeysaa waxayna bixisaa tuubbooyinka fiberlass si ay ula kulmaan heerar badan oo heer qaran iyo caalami ah oo ay ku jiraan DIN, ASTM, AWWA, ISO iyo kuwa kale oo badan. Dhererka caadiga ah ee hal tuubbo waa 6m ama 12m. Dhererka loo habeeyay ayaa sidoo kale lagu gaari karaa goynta.
Hore: Labada Alaab ee Laminate Products
Xiga: Nidaamka Qufulka
Nidaamka tuubooyinka FRP
Nidaamka Dhuumaha GRP
Qalabka Fiberglass guud ahaan waxaa laga sameeyaa geedi socod gacan-qaadis ah, oo ay kujiraan waxyaabo aad u sarreeya. Qaabab kala duwan ayaa lagu xaqiiqsan karaa iyadoo la isticmaalayo caaryada. Kaydinta kaladuwan ayaa loo dooran karaa shuruudo dhexdhexaad iyo adeegyo kala duwan. Wixii qalab ah oo ku habboon cabbirrada iyo qaababka ayaa la heli doonaa markii la codsado. Qalabka Fiberglass-ka ayaa aad loo jecelyahay maadaama ay soo bandhigayaan: • Xoog weyn marka loo eego culeyska • Xakamaynta korantada iyo kuleylka • U adkeysiga burburka iyo kiimikada • R ...
Mashiinka Dabaysha ee GRP, Caaryada, Mashiinka Dabaysha ee FRP, Fiberlass-ka Farsamaysan, Dhoolatus gacmeed, Mashiinka Dabaysha Fiberglass,